Author: Bakasa Dait
Waggooti lakkaawwaman; baroonni darban.
Garuu jaala koo Onnee koo irraa akkan si jaaladhu siif heeruun fedha! Kana ta’uu baannaan garuu sammuusaa ‘deactivate’ godheen dhagaafi dinnicha illee akka adda baafachuu hin dandeenyetti ‘offline’ isa taasisa. Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati Nov 30, TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti Oct 1, Ammammoo carraa hojiitiin ittuu sirraa fagaadheen jira! See more of Galmee Jaalala Dhugaa” on Facebook. jqalala
Qoraasuma Jaalalaa Community Organization. Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Nama sirritti gaari eega jira Erga jaalalli kee na keessatti ‘account’ banaatee jaaalala waa’eedhuma keen yaada. Kan biraa yoo jettan tarreessa. Nagaan akka dursu beeka situ qalbii koo fudhate malee. Fayyaa fi Jaalala featured Jaalala. Garuu umuriin ishee waan deemeef qofa, nama akka isaatti ishee jaallatu waan hin arganneef qofa, dhiira jaaala ishee jalqabaa sammuu ishee keessaa balleessu waan yoomuu harkisuu hin dandeenyef qofa, waan heerumtee dhala godhachuu qabduuf qofa, waggaa lama booda dhiira biraatti siqxee haadha manaa taate.
Jaalale koo duraan dagachu dadhabe 2.
TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti. Kan ishee kanaas akkasuma. Email or Phone Password Forgot account? Mammagaala ija kuulaa Kukkuullee ilkaan anaani Nootoo fii simboo qaban Fuularraa walalaqii Dubarran biyya kootii Sections of this page. Fedhi akkas gonkuma jaalaal qabu 9. Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman.
Email or Phone Password Forgot account? Sections of this page. Sirriitti jabeeffadhu – hinaaftotni ‘hack’ godhanii tokkummaa keenya diiguu danda’u waan ta’eef!
Sitti dhufuuf hangam turullee walarguun kenya hin oolu! Garuu, utuu garaa hin jabaatin jecha gaaffii koof furmaata kennuun deebii naaf deebifte! Waa’ee sabboonummaa kee irratti ‘comment’n siif kennu hin qabu. Sin jaalladha dhugaa jaalala isaa waan ittiin argitu hin qabdu; kabaja dhiirri Jaalallee isaaf qabuu osoo itti hin agarsiisin itti heerumte; akka haadha manaatti osoo hin taane akka warteessuutti ammoo waliin jiraata jirti.
Afaaniin kaninni itti jaalal jireenyi isaa walitti hin dhufu. Isheef yeroo hin qabu, osoo bor borii mana isaa gadhiiftee deemtee itti tola, osoo hin fedhin waan ulfoofteef qofa ishee fudheehooti. Hanga amma maalif kophummaan jiraate jaalale malee? Andualem Befikadu Demelce Personal Blog.
Jaalalatti hin qoosamu kutaa 4ffaa. Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha! Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5.
Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa.
Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte. Dhalli ishee kun isheef waa hedduudha. Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate.
Safuu Jaalalaa Entertainment Website. Ani ergan si jaalladhee eegalee hanga harraatti guyyaa tokkollee akka jaalallee kootti harka si qabadhee si waliin bashannanee akkan hin beekne ni beekta! Anarraa kan darbe akka namni kaan dhoksaa kee hin agarre ‘privacy’ kee seenii ‘only him’ kan jedhurra kaa’i.